LG G3 mini ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရုပ်ပုံများအားလုံး Androidsis
အဖြစ်ကောင်းစွာ၏အဖော်များကထုတ်ဝေခဲ့သည် ဂျီအက်စ်အမ် Arena သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အားလုံး LG G3 Mini Features နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုရီးယားနိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီမှမကြာမီတွင်စတင်မည့် terminal အသစ်သည်၎င်း၏အသေးစားအကွာအဝေးတွင်ရှိသော၎င်း၏ကိန်းဂဏန်းများကိုတိုးချဲ့ရန်မကြာမီစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကိရိယာအသစ် LG, LG G3 Beat ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လိမ့်မယ် LG G3 ၏ mini version တွင်၎င်းတွင်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏နာမည်မှား၊ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်ဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမဖြုန်းတီးရန်ဆန္ဒရှိသော Android သုံးစွဲသူများအတွက်သင့်တော်သောနည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်များထက်ပိုသည်။
GSM Arena မှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဤပူးတွဲပါပုံများတွင်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှကောင်းမွန်စွာတွေ့မြင်နိုင်မည်နည်း LG G3 Beat ကိုလူမီနီယံပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ဒါတွေကိုတွက်ကြည့်ပါ စဉ်းစားမရသောနည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များမဟုတ် အသေးစားထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့မော်ဒယ်အဘို့:
၏ဗားရှင်း အန်းဒရွိုက် 4.4.2 မကြာမီတွင် Android 5.0 နှင့်အသစ်ဖြစ်သောအသစ်စက်စက်ဗားရှင်းအပါအ ၀ င်ပိုမိုမြင့်မားသော Android ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည် အန်းဒရွိုက် L ကို.
5″ 1280x720p FullHD IPS မျက်နှာပြင်။
Quad-Core 1,2 Ghz ပရိုဆက်ဆာသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပုံစံကိုမဖော်ပြဘဲ Qualcomm ဖြစ်သည်။
2GB RAM ။
သိုလှောင်မှုပမာဏ 16Gb နှင့် microSD ကဒ်အထိုင်။
နောက်ဘက်ကင်မရာ 8mpx ။
4G LTE ဆက်သွယ်မှု။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမိမိလူသိများအောက်မှာ Optimus UI ကိုအသုံးပြုသူ interface ကို Knock Code၊ Quick Memo၊ Quick Slide နှင့် Quick Remote Lock နည်းလမ်းများပါဝင်သည်။
သံသယကင်းစွာဖြင့်၊ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုရန်လိုက်နာမည့်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည် ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ, စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကြောင့်ငါက၎င်းကိုလှည့်ပတ်သွားလိမ့်မည်ဟုပြောဝံ့သည် RRP ၏ 399 ယူရို.
ပြီးတော့ဒီ LG G3 mini ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G3 mini ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်
သင့်ဖုန်းတွင်ရှိနိုင်သည့်မယုံနိုင်စရာကောင်းသည့် Android L အင်္ဂါရပ်လေးခု
Android L ရဲ့ကြီးမားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုကိုသင်၏ဖုန်းသို့ယူလာနည်း